२४ घन्टामा उपत्यकामा भित्रिए ७ हजार ! - समाचार - कान्तिपुर समाचार
२४ घन्टामा उपत्यकामा भित्रिए ७ हजार !
वैशाख ३०, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थानकोट, फर्पिङ, र जगाती नाका हुँदै भित्रिएको सवारीबाट ७ हजारजना उपत्यका भित्रिएका छन् । सरकारले काठमाडौं प्रवेशमा कडाइ गरेको भने पनि कोरोना संक्रमण फैलिएका जिल्लाहरुबाट समेत राजधानी प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ ।
नाकामा उनीहरुलाई काठमाडौं आउने कारण सोधिन्छ । विद्युतीय वा कागजी जुनसुकै पास देखाएको भरमा उपत्यका बाहिरबाट आएका सर्वसाधरणले सहजै प्रवेश पाइरहेका छन् ।
प्रहरीले राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गामा आउने जाने हरेक व्यक्तिको नाम, ठेगाना र नम्बर टिप्न थालेको छ । अझ दिउँसो काठमाडौं प्रवेश गर्नेको त ज्वरो पनि नापिन्छ । काठमाडौं प्रवेश गर्ने यात्रुको विवरण टिप्ने केही प्रहरीले पीपीई सेट पनि लगाएका छन् । हातमा पन्जा र मास्क सबैले लगाएका छन् । यो नाका हुँदै आउने सवारीले उपत्यका बाहिरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास बनाएर ल्याएपछि सहजै काठमाडौं प्रवेश पाउँछन् ।
नागढुङगा नाकाबाट मात्रै पास लिएर काठमाडौं प्रवेश गर्ने निजी सवारी दैनिक एक सय भन्दा बढी हुन्छ । प्रहरीका अनुसार यो नाकाबाट सोमबार मात्रै एक सय ५४ वटा निजी गाडीमा चार सय ५४ जना काठमाडौं भित्रिएका छन् । आइतबार १ सय ४७ निजी गाडीमा तीन सय ३४ व्यक्ति उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं छिरेका थिए । यी बाहेक तरकारी, दुध, खाद्यन्न, निर्माण सामाग्री बोकेर काठमाडौं आउने सवारीमा पनि यात्रु ओसार्ने गरेको प्रहरीको तथ्याङकले देखाउँछ ।
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ २१:२९
भारतमा जारी लकडाउन अवधि बढाउने संकेत
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा २० लाख करोडको आर्थिक प्याकेजको घोषणा
वैशाख ३०, २०७७ एजेन्सी
नयाँ दिल्ली — भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जारी लकडाउन बढ्ने संकेत गरेका छन् । मंगलबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै मोदीले नयाँ नियमसहित ‘लकडाउन–४’जारी रहने बताएका हुन् ।
भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित र मृतक संख्या निरन्तर बढेपछि उनले १८ मेबाट चौथो चरणको लकडाउन जारी हुने र अबको लकडाउन नयाँ स्वरुपको हुने पनि बताएका छन् । पछिल्लो पटक लम्ब्याइएको लकडाउन १७ मेमा सकिँदैछ ।
यसैबीच राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको पनि घोषणा गरेका छन् । उनले श्रमिक र किसानका लागि २० लाख करोडको भारतीय मुद्रा आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेका हुन् । यो रकम भारतको कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनको १० प्रतिशत रकम हो ।
मंगलबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै मोदीले दैनिक काम गर्ने वर्गका लागि सरकारले प्रदान गर्ने सहयोग सिधै लक्षित वर्गको खातामा पठाइने पनि बताएका छन् । भारतमा हालसम्म ७२ हजार ५ सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या २ हजार ३ सय ३१ पुगेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ २१:०९